Qubsuma koo 13: 'Anaaf milkaa’uu jechuun qarshii argachuu qofaa miti' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright ABDULSELAM ABAJEBEL
Goodayyaa suuraa Soorataafi cuunfaa mana cunfaa Abdulsalaamitti qophaa'an keessaa muraasa
Abdulsalaam Abbaajabal jedhama. Magaalaa Niiw Yoork keessatti abbaa mana cuunfaa badhaafamaa 'Oasis' jedhamuuti. Baruumsa kallattiin hojii isaatiin wal qabatu osoo hin qabaatiin tattaaffii dhuunfaa isaatiin sadarkaa kanarra gahuu danda'e.
Milkaa'ina kanarraa gahuuf bu'aa bayii jireenyaa keessa dabarse akkasiin nuuf qoodee jira.
Dhaladhee kanan guddadhe Magaalaa Jimmaa bakka Shabee jedhamtutti. Isa boodas, umuriin koo barnootaaf yoo gahu mana barnootaa Shabee galuun hanga kutaa torbaa baradhe.
Hanga kutaa 8 ergan baradheen booda, sababa du'aa abbaa kootiin barnoota koo dhaabee.
Maatii guddaa keessattan guddadhe, obbooleeyyen 14 fi ijoollee abbaan koo guddise gara 30 ta'anan qaba.
Abbaan koos namoota walitti qabanii nyaachisuufi gargaaruu jaalatu ture. Yoo isaan boqatan garuu kun hunduu hir'achu jalqabe.
Kutaa saddeetitti kiliniika
Anis maatii koo deegaruuf jecha barnoota koo dhaabuun hojii barbabaachuuf dirqame.
Jalqaba lafa Sadoo jedhamtu demuun ogummaa wal'aansaa abbaa kiyya irraa baradheen kilinikii banadhe.
Hanga ta'e ergan hojjadheen booda garuu mootummaan heyyama hin qabdu naan jennaan dhiisee achi bahe.
Garuu gara manaatti hin deebine, lafan itti hojjadhee galii argadha jedhee abdadhe; lafa warqee haala aadaatiin qotamu- Diimaan deeme.
"Akka carraa ta'ee warqee baay'ee yoo argatte, daftee soramta' waan jedhamu sammuu ijollummaatiin dhagaheen ture. Anis waa argadhee jiruu koo fooyyeessuuf jecha umurii waggaa 16tti garasi qajeele.
Achi yoon gahuu garuu kan haasa'amuufi kan achi jiru baay'ee garaagari ture.
Warra mana nyaataa qabaniif bishaan malkaadhaa waraabaa, gammoojjii bu'ee warqees qotaa, nyaata namaaf bilcheessaa akkasumas warra rakkina adda addaa keessatti argaman tajaajiluudhaan, jireenya koo mo'achuuf yaalu eegale.
Haala akkasitiinis waggaa tokkoof Diimaa keessa hojadheera.
Osuman achi jiruus ummata Surmaafi Anyuwaak jidduutti waliti bu'iinsi ka'uun hirriyoota koo dabalatee namoonni baay'een du'an.
Achii baqachuunis kara Bulee Horaa Boranaa, ittaansee Gujii keessa darbuun Shaakkisoo deemuun hojii warqee qotuu itti fufe.
Haa ta'u malee, achittis ati daa'imaa, qotuu hin dandeessu jechuun garee waliin qonnu keessaa na ari'atan. Kanaafu mala biraa yaaluuf murteesse.
Achitti nyaata argachuun rakkina waan tureef, isaan waan barbaachisu naaf dhiyeessuun ani ammo namoota 30'f guyyaatti al sadi nyaata qopheessuun qixxee isaanii hirmaachuu eegale.
Ergan baatii jahaaf akkasiin hojadheen booda, rakkinuma achi ture irraa ka'uunis maaliif gara biyya biraa demee jiruu hin foyyeeffannu jechuun hiriiyyoota koo waliin yaadu eegale.
Yaadu qofas miti, gara biyya Jabuutiitti qajeelle. Achinis bu'aa bahii ji'oota shanii booda karaa Yemaniin Saa'udii gallee. Imala keessas bu'aa ba'ii fi cinqii hedduu dabarsine turre.
Haa ta'u malee imala dheeraa kana boodas poolisiin Saa'udii daangaa irraa nu qabanii gara biyyaatti waan nu deebisaniif, karoorri koo naaf hin milkaa'iin hafe.
Goodayyaa suuraa Abdulsalaam fi leellistoota soorata isaa
Garuu ammas naaf hin milkoofne jedhee galee hin teenye. Gara Keeniyaattin qajeele. Achis gahee harka namaa eeguurra hojiiwwan adda addaa hojjachuun eegale.
Gara waggaa shanitiif hojii akka mana rifeensaa fi waanuma adda addaa irraa teenisa minjaalaa hojachuun galii argachaa, namootas gargaaru jalqabe.
Isa boodas, karaa sagantaa maatii koolu galtoonni ittiin wal-agarsiifamaniin bara 2004'tti Keeniyaa irraa Ameerikaa Niiw Yoork galu danda'e.
"Attamiin ofi gargaaree warra kaan gargaaru danda'a?"
Ani yoon gara Ameerikaa dhufu, hawwiin qalbii kootii gahuu kootiin wanti hundi kan raawwatu natti fakkaata ture, garuu dhugaansaa isaarraa adda.
Sirriiyyu ji'oota jalqabaatiif afaan, lafti fi qilleensi haaraa natti ta'usaatiin amman waljalaan itti barutti baay'een rakkadhen ture.
Garuu hawwiin koo inni guddaan hojjachuun geeddaramu waan tureef, Ameerikaa galee guyyaa lamaffaatti ture kan mana uffati itti micammutti qaxaramee hojii kanan eegale.
Itti aansuunis, as daandii xiyyaaraa Itoophiyaatti qaxaramuun gosawwan hojii gara shanii olitin hojjachaa tureera. Dhumarattis hojii xiyyaaraaf boba'aa gutuun hojjadhe.
Isaan booda gaaffii keessa kootii attamiin ofi gargaaree warra kaan gargaaru danda'a, jedhuuf deebii argachuuf namoota mariisise.
Garuu namoonni tokko tokkoos, ati hin barannee, maallaqas hin qabduu jechuun kan hamlee na buusan turan. Osoon humna qabaadhe wantin jijjiruu, ilaalcha ijoolleen kana hin dandeessuu, ati mucaadha jedhun balleessa.
Abjuu jaraa osoo ijollumaan keessatti dhaamsuu baannee, ganamumaan kennaa keessa isaanii jiru shaakaluu eegalu.
Goodayyaa suuraa Abduusalaam Abbaajabal ashaakltiiwwan ittiin nyaataafi cunfaa qopheessu waliin
Warra guddaadhaafis yoo cimne malee, haalli akkasii sun abjuufi hawwii nu keessatti dhaamsa. Kanaafuu gara sadarkaa ittaanuutti ce'uun murtee mataa ofii barbaadan jedha.
Anis yeroon argadhe hundattu leenjii gabaabaa adda addaa fudhachuufi kitaaba dubbisuu ittin fufe.
Isaan booda ture eegaa, mana cuunfaa 'OASIS Jima Juice Bar' jedhu kana bara 2012'tti kanan saaqee. Bara itti aanuttis Niiw Yoork keessatti mana cuunfaa sadarkaa sadaffaa ta'uun waraqaa raga argate.
Ergsiis akkasuma waggaa waggaan sadarkaa lammaffaa, sadaffaa irrattin argama. Ammas attamiin maqaa daldalaa beekamaa 'biraandii' addunyaa akka itti ta'u danda'u irratti hojjachaan jira.
Kaayyoon daldala kiyyaa galii argachu qofa miti, attamiin namooti soorata fayyaa qabeessa akka argataniif gargaaru ofi keessa qaba.
Anuu nyaata irraa kan ka'e rakkinni sukkaaraa na mudate ture. Soorati fayya qabeessi ammo rakkina fayyaa akkasii to'achu ykn hir'isuuf gahee olaanaa qabu.
Manneen barnootaa, waldaale amantaa fi jiddu gala hawaasaa deemuun seenaa kiyyaafi attamiin nyaata fayya qabeesa soorachu akka dandeenyu irratti workishooppii adda addaa taasisuun eegale.
Yeroo ammaatis namoota yeroo gabaabaafi gutuu hojjatan malee nama 10 ta'uuf carraa hojii saaqeera.
Asuma Niiw Yoork keessattis mana cuunfaa lammaffaa saaqeera. Kaanaadaattis akkasuma.
Isteetiiwwan adda addaatii gaaffiin 'koottuu asittis nuuf bani' jedhu dhiyaachaa waan jiruuf, karoorri kiyya bara dhufuus lafa namoonni keenya jiranitti damee babal'isuun carraa hojii uumuudha.
Akkasumas manni cuunfaa kun gara biyyaattilleen galu qaba hawwii jedhus qaba.
Kana malees, dhaabbanni koo kan tola oltummaa 'OASIS Power House' jedhamu Onkololeessa 29 , 2017'tti eebbifamee tajaajila eegaleera.
Kaayyoon dhaabbata kanaas namootni ogummaa adda addaa qaban, namoota oggummaa sanaaf fedhii qabaniif kanfaltii malee haala itti barachu danda'an mijeeessuudha.
Oggeessoota damee adda addaa irraa afeeruun beekumsaa fi ogummaa isaanii warra fedhii qabaniif akka qoodaniif hojii qindeessuun hojjadha.
Jarreen jiddu gala kanatti ogummaa gorsaa kennanis Yunivarsiitii Kolombiyaa fi koleejjii Siitii jedhaman irraa dhufu. Walta'iinsa isaaniinan hojjadha.
Namni kamiyyuu umamaan guutuu ta'ee dhalata, garuu jireenya keessatti bakka fedhu akka hin geenye hawaasni keessatti guddanne nu murteessa.
Waan hojjannuun fiixaan bahuuf wanti guddaan ofitti amanuu, akkasumas warra kaan komachu fi namootarraa waa eeguu dhiisuu dha.
Waanan jaaladhuun hojjachaa jira, kanaafan milkaa'ees. Anaaf milkaa'u jechuun qarshii argachu qofaa miti.
Waan jaalatan hojjachuun uummata gargaarraan, anaaf milkaa'inni kanadha. Horiin karaa kamiinu ni argama, jiruu dhugaa jiraachuun garuu qarshii caala.